Njikwa nchịkwa ugwu
Ọkọ ụgbọala Echiche ndị dị oke
Ala Nchịkwa Descent Hill
Ọchịchị ugwu ugwu bụ ihe nchebe ụgbọ ala nke e mere iji kwado njem dị mma na elu akara. A na-ebute atụmatụ ahụ iji mee ihe na ebe siri ike, mana enwere ike iji ya mgbe ọkwọ ụgbọ ala chọrọ ịdata nwayọọ nwayọọ na elu ugwu. N'adịghị ka ijikwa ụgbọ mmiri , nke na-arụ ọrụ karịa otu ọsọ, a na-emekarị usoro nchịkwa nke ugwu ugwu ka ha wee nwee ike rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na ụgbọ ahụ na-agagharị nwayọọ karịa 15 ma ọ bụ 20 mita. Ihe dị iche iche dị iche site n'otu OEM ruo na-esote, ma ọ bụ n'ozuzu ọgbara ọhụrụ ngwa ngwa.
Ihe ndekọ nke nchịkwa ugwu ugwu
Bosch mepụtara usoro nhazi nke ugwu ugwu nke Land Rover, nke gosiputara ya dika ihe omuma nke Freelander. The Freelander enweghi igbe igbe dị ala na ọdịiche dị iche iche nke Land Rover na ụgbọala ndị ọzọ dị 4x4, na HDC ka a kwụrụ ka ọ bụrụ maka ọnọdụ ahụ. Otú ọ dị, mmalite mmejuputa nke teknụzụ ahụ tara ahụhụ site na nkwụsịtụ ole na ole, dịka ọsọ ọsọ nke dị oke elu maka ọtụtụ ọnọdụ. Mgbe e mesịrị, mmejuputa mmepe nke ugwu ugwu, ma site na Land Rover na OEM ndị ọzọ, ma debe ọsọ ọsọ "ije ije" ma ọ bụ kwe ka onye ọkwọ ụgbọala gbanwee ọsọ ọsọ.
Ogologo Ogologo Ogologo Ijeghari Maka Ala Ugbo
Dị ka ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-ahụ maka nchekwa ụgbọala, na usoro enyemaka ndị ọhụụ dị elu, akara ugwu na-emepụta ọrụ nke onye ọkwọ ụgbọala ga-eji aka ya eme. N'okwu a, ọrụ ahụ na-achịkwa ọsọ nke ụgbọ ala na mkpọda ala na-enweghị nkwụsị ụkwụ. Ndị ọkwọ ụgbọala na-emecha nke ahụ site n'ịda ụda ma na-ejide brakes, nke bụkwa otu usoro ihe nkesa nke usoro ugwu na-achịkwa.
Ụzọ nchịkwa ugwu na-arụ ọrụ dị nnọọ ka ụzọ mgbagha na -ejikwa arụ ọrụ kọmputa na-achịkwa ọrụ. Dị ka usoro ndị ahụ, HDC nwere ike ịtụgharị na ngwaike ABS ma gbanye frek na-enweghị ihe ọ bụla site na ọkwọ ụgbọala ahụ. A na-achịkwa wiilị ọ bụla na-achịkwa n'ụzọ dị otú a, nke na-enye ikikere nke ịchịkwa ugwu iji nọgide na-eduzi site n'ikpochi ma ọ bụ ịtọhapụ wiil ndị ọ bụla dịka mkpa dị.
Kedu ka I si eji Control Control Center?
Ọ bụ ọtụtụ ndị OEM na-enye usoro nchịkwa nke ugwu ugwu, na arụmọrụ zuru oke nke usoro ọ bụla dịtụ iche. N'ọnọdụ ọ bụla, ọsọ nke ụgbọ ahụ ga-adị n'okpuru ebe a kapịrị ọnụ kpọmkwem tupu enwee ike ịrụ ọrụ akara ugwu. Ọtụtụ OEM chọrọ ka ụgbọ ala dị n'okpuru 20mph, ma e nwere ụfọdụ ndị ọzọ. N'ọnọdụ ụfọdụ, dị ka Nissan Frontier, ụzọ nrịgo dị na-agbanwe dabere na nhazi nke nkwụsị. Ụgbọala ahụ ga-abụkwa ma ọ bụ megharịa ma ọ bụ weghaa ihe nkedo na ọkwa tupu enwee ike ịmalite igodo ugwu. Ọtụtụ ụgbọala ndị nwere HDC nwere ụfọdụ ihe ngosi na ngwugwu nke gosipụtara mgbe ọnọdụ niile na-ezute na njirimara dị.
Mgbe a choro ihe niile a chọrọ, a ga-arụ ọrụ akara ugwu site na ịpị bọtịnụ. Dabere na OEM, bọtịnụ nwere ike ịbụ na console center, n'okpuru ụyọkọ ụda, ma ọ bụ n'ebe ọzọ. Ụfọdụ OEM, dị ka Nissan, jiri mgbanaka rocker kama igodo dị mfe.
Mgbe ejiri akara ugwu na-arụ ọrụ, a na-arụ ọrụ nke ọ bụla dị iche na nke ndị ọzọ. N'ọnọdụ ụfọdụ, ngwa ngwa nke ụgbọ ahụ nwere ike ịchịkwa bọtịnụ nchịkwa ụgbọ mmiri. N'ọnọdụ ndị ọzọ, enwere ike ịgbatị ọsọ site na ịmị gas ma belata site na ịpị breeki.
Ònye Na-enye Ọchịchị Nchịkwa Ugwu?
Ala Rover malitere site na ala ugwu ugwu, ọ ka dị na ụdị dịka Freelander na Range Rover. Na mgbakwunye na Land Rover, ọtụtụ OEM ndị ọzọ emewokwa ka atụmatụ ndị dị otú ahụ dị na SUVs, crossovers, ụgbọ ala, sedans, na ụgbọala. Ụfọdụ n'ime OEM ndị ọzọ na-enye ugwu ugwu gụnyere Ford, Nissan, BMW na Volvo, mana ha na-ele anya na-agbakwunye ya na ebe ha na-enwe kwa afọ.
Otu esi achọpụta na agba ụzụ na-agba ọsọ ụgbọala
Kedu ihe bụ AppRadio?
Kedu nke stere CarPlay na-echere gị?
Dash Igwefoto Alternatives
Kedu ka ndi na-agbaputa ndi ozo na-aru?
Atụmatụ Stereo Bluetooth Stereo
Mgbawa ndị na-emepụta ihe na-ahụ na gburugburu
Nyocha nke Pyle PL71PHB Headrest LCD Set
Ọganihu na Technology Safety Safety
Smartwatches na Ndụ Ogologo Ndụ
Njikwa Agba na TV gị
Kedu ihe m ga eji eji egwuri egwu?
Gịnị Mere e ji kpọọ Internet Explorer?
Ịmepụta ụzọ na SQL Server 2012
Wụlite ma dezie Nchedo Ngwá Ọrụ AutoCAD
Ihe Nlereanya Na-eji nke "xargs" Nye iwu
WiMax vs. LTE maka Mobile Broadband
Egwuregwu Egwuregwu Top 2003
'Ese foto' usoro nlere anya na tumadi
Na-eduzi na Mbadamba ụrọ na ibu
Nkọwa nke LINE vs WhatsApp maka Oku VoIP na Izi ozi
9 Ike Netflix Hacks iji meziwanye Ahụmahụ Gụgharịrị
Apple's TV App: Ihe Ị Kwesịrị Ịma
Kedu ihe bụ ZXP File?
Mordaunt-Short Carnival 2 Akwụkwọ na-ekwu okwu n'ikike
Nyochaa: Hitcase Pro Waterproof iPhone Case
Kedu ihe bụ PSP File?
Kedu Igwe Ntanetị Ntanetị Na-adịghị Mma Maka Gị?
Yongtek ELM 327 OBD-II Scanner Bluetooth